घर क्लासिक स्टार्स जेनिस्टाइन जाइडेन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइबिल
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल कथालाई सब भन्दा राम्रो भनिन्छ उपनाम; 'Zizou'। हाम्रो जाइसिने जेडीन बचपन स्टोरी प्लस अनल्टर्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपन समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता सम्म पुग्नुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उहाँका बारेमा धेरै साना ज्ञात तथ्यहरू भन्दा पहिले जेनिनन जेडीनको व्यक्तिगत जीवन कथा समावेश छ।
हो, सबैले उनको निपटने क्षमताहरूबारे जान्दछन् तर केवल केहि प्रशंसकहरूले जेइसेनन जिडेन जीवनीको कथा मान्दछन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरू गर्न दिन्छ।
Zinedine Zidane बचपन फोटो
Zinedine Yazid Zidane मार्सिले, फ्रान्समा Smaïl Zidane (बुबा) र Malika (आमा) दुवै अल्जीरिया मूल मा 23rd को 1972rd मा जन्मिएको थियो।
Zidane मार्सेल, फ्रान्सको दक्षिणी दक्षिणपश्चिम शहर मा एक अपराध-भंग आवास आवास विकास ला कास्टेलेन मा भयो। अपराध, बेरोजगारी र आपत्तिजनक दर असुरक्षित आवासीय पड़ोसमा उच्च रूपमा थिए।
तिनको बुबा, स्माइल ज़िडेनले रातभरको विभाग पसल पसलको रूपमा स्थिर काम गरेका थिए, यद्यपि परिवारले तंग क्वार्टरमा बाँच्न थालेको थिएन - सबै सातले सँगै बस्न र खाना खाए। यसले जवान जोजाउलाई आफ्नो परिवारमा गरीबी समाप्त गर्न खोज्ने विकास गर्यो।
उनी फुटबलको खेलमा पाँचौंको निविदा उमेरमा उनको वरिपरिका बासिन्दाका बच्चाहरूसँग परिचय गराइयो। त्यस समयमा, उत्तरी अफ़्रीकी फ्रान्सेली प्रवासीलाई खेलमा कुनै आशा थिएन। प्रभावकारी, जोजाउ एक थियो जसले अरूलाई पछ्याउनको लागि उदाहरण बसाल्थ्यो।
उनीहरूका प्रवासी मित्रहरूका लागि, फुटबल समय मात्र पास गर्न एक खेल थियो। जिजाउ आफैंको लागि, फुटबल गरिबीको अन्त्य गर्न खोज्नु भएको थियो जसले आफ्नो परिवार र प्रियजनहरूलाई पराजित गर्यो। यसले राम्रो समयको सुरुवात गर्न सकेको छैन त्यसैले खेलकुदका अनुहारहरू अचम्म लागे। यसरी उनीहरूको युवा फुटबल क्लबमा दर्ता गर्न खोजेको थियो। ZZou वर्ष 1981 मा यूएस सेन्ट हेनरी फुटबल क्लबमा दर्ता गरिएको।
क्लबमा मात्र अल्जेरियाई आप्रवासी बजेटको रूपमा, जेजौले आफ्नो बस्तीको बारेमा नस्लीय स्तुति र भोजको विषय बनाएको थियो। उहाँले तिनीहरूलाई बहिरा कान गर्नुभयो। उनले एसए सेप्टेम्स-लेस-वाल्लन्सको क्लबलाई छोड्ने विकल्प पाए जहाँ उनले 1983 बाट 1986 सम्म खेलेका थिए। 1986 बाट कानहरूमा अर्को कदम। उनले त्यहाँ आफ्नो युवा क्यारियरलाई 1989 मा समाप्त गर्यो। उहाँले आफ्नो युवा क्यारियरलाई 9को रूपमा सुरू गर्नुभयो तर पछि 10 भूमिकामा जानुभयो।
जवान जडनी- जवानहरूलाई वरिष्ठ क्यारियरबाट
यी बहिरा कान नस्लवादमा तर क्यान्सरको वरिष्ठ टोलीमा सहभागी हुन पछि लामो समयसम्म थिएनन्। उहाँले उनलाई दुर्व्यवहार गर्ने लडाइँ गर्नुभयो। यसका लागि उनीहरूले भोग्नु पर्ने कारणले गर्दा उनी प्रायः आफ्नो प्रारम्भिक वरिष्ठ क्या क्यारियर बिताएका छन।
Zinedine Zidane एक विनम्र परिवारबाट आउँछ। छिमेकीका मानिसहरूको विपरीत, जाइडेन परिवार धेरै सम्मानित हुन्छ। उनीहरूले एक व्यावहारिक सहनशील जीवन बिताएपछि त्यसो गर्दा अन्य व्यक्तिहरू जस्तै उच्च अपराधमा संलग्न थिए र मूलतः बेरोजगार थिए।
उनको चित्रमा चित्रण गरिएको पेशामा पूर्व वेयर-हाउसमेन्ट थियो। उनको छोराले यसलाई फुटबलमा बनाइदिएको छ।
Zinedine Zidane पिता - Smaïl Zidane
उनको चित्र मालिका जिद्दीन, तल चित्रित एक पूर्व गृहमन्त्री थियो। मलाका जाइडन पनि उनको सेवानिवृत्त भए जब उनको छोरा यो फुटबल मा बनाइयो।
Zinedine Zidane आमा- Malika Zidane
भाइहरू: Zinedine Zidane सँग3भाइरसहरू तलका चित्रमा छन्।
Zinedine Zidane ब्रदर्स
मेड्रिड जडिने (बायाँ), फरीद जइडिने (तल दाहिने) र नोरेडिन जेडने (शीर्ष), सान्टियागो बर्नबेउ स्टेडियममा जेनिस्टिनको विदाई को लागि7मई 2006 मा पुरा Zidane परिवार संग पुनर्मिलित गरियो। "जोजाउ" को तीन भाइहरू एक खेलाडी र कोच दुवैको रूपमा आफ्नो कार्य प्रबन्धनमा समान रूपमा संलग्न छन्।
सिस्टर: Zinedine Zidane सँग एक सानो बहिनी छ लिला जइडेन।
Zinedine Zidane बहिनी - लीला Zidane
लिला पनि क्यानाडा क्यारियर व्यवस्थापनमा संलग्न छ। त्यो उनको छवि अधिकार व्यवस्थापन को लागी छ।
Zinedine Zidane लाइट स्टोरी यहाँ सुरु हुन्छ। 17 को उमेर मा, जेडनेन उनको भविष्य पत्नी, वेरनिकिक फ Fernandez (मा जन्मे Aveyron स्पेनिश मूल) जबकि कान को लागि 1988-89 सीजनमा खेल्दै। ती मानिसहरूले के साँचो प्रेम बोकेका थिए।
जब जाइसिने जाइडेन मिले प्यार
त्यो सबैभन्दा ठूलो मध्ये एक महिलाको रुपमा चिनिन्थ्यो पहिले भेरियोनिक फर्नाडिज लेन्टोस्स्को एक नर्तकी र मोडेल फुटबल इतिहासमा! त्यो सुन्दर भव्य वेरोनिक फर्नाडिज लेन्सस्कोस्को खुसीसाथ छ विवाह सेवानिवृत्त फुटबल प्लेयर Zinedine Zidane। तिनीहरूले 1994 मा विवाह गरे।
Zinedine Zidane लव स्टोरी Veronique फ Fernandez Lentisco संग
उनीहरूको विवाहको फल एक वर्ष पछि सुरु भयो। उनीहरूको चार जना छोराछोरीको लेखनका रूपमा छन्। Enzo एलन Zidane फर्नेजज जन्म भएको थियो 24 मार्च 1995, लुका Zinedine Zidane फर्नेज (जन्म 13 मई 1998), Theo Zidane Fernández (जन्मे 18 मई 2002), र इलीज जिडन फर्नेन्डेज (जेएनएनयुमएक्स डिसेम्बर 26 जन्मियो)।
Zinedine Zidane परिवार जीवन - बच्चाहरु
रियल म्याड्रिड एकेडेमीको माध्यमबाट सबै जइडिने चार जना केटाहरू बिते। उनको पहिलो पुत्र, एन्जो एक मिडफिल्डर हो जबकि लुका एक गोलकीपर हो। Theo र Elyaz पनि midfielders हो।
Veronique र Zinedine गिनती र 20 वर्ष भन्दा अधिक गणना को लागी मोटा र पतली को माध्यम ले एक साथ छ। उनले आफ्नो टाउकोमा कपाल गुमाउनु भएको उमेर। उहाँले यसो भन्नुभयो: "मेरी श्रीमतीले मलाई यस्तो प्रेम गर्दछ, त्यसैले यो समस्या होइन"
तर,के उहाँ सम्झनुभएको छ
Zinedine Zidane तथ्य - के लागि सम्झनु भएको छ
जेडेन ग्रहमा शान्त व्यक्ति मध्ये एक जस्तो देखिन्छ, तर यो सत्यबाट टाढा छ। उनी आफ्नो आकस्मिक स्वादको लागि कुख्यात थिए - केही कुरा, केही विश्व कप विजेता मध्यक को खर्च।
तर,सामुदायिक सेवा रातो कार्ड
क्या हुन्छ जब तपाईं आफ्नो कैरियर को अंतिम खेल मा एक लाल कार्ड ले दिइन्छ कि तपाईं निलम्बन को सेवा नहीं गरेर सकते किनकी तपाईं अब खेलाडी हुनुहुन्न र यसैले वैसे पनि खेल नहीं हुनेछ? तपाई सामुदायिक सेवा गर्नुहुन्छ। यो ZIzou को मामला थियो।
Zinedine Zidane तथ्य - सामुदायिक सेवा
'जोजौ' पछि मार्को मटरजाजी को टाउको को लागि एक लाल कार्ड मिल्यो, उनलाई सामुदायिक सेवा गर्न को लागी उनको सेवानिवृत्ति ले अप्रचलित गर्न को लागी गरेको थियो। जबकि सामुदायिक सेवाको विवरण खुलासा गरेन भने, उनीहरूलाई फिफाको मानवीय गतिविधिहरूमा सेवा पुर्याउनु भएको थियो। यसको अर्थ उसले सडकलाई पखाल्न वा शौचालय सफा गर्न सक्छ, जसले जान्दछ?
तर हामी के थाहा छ कि यदि तपाईं हिंसक आचरणको लागि तपाईंको क्यारियरको अन्तिम खेलमा रातो पाउनुहुन्छ भने, तपाईं पक्का मात्र नरक को रूप मा नरक हुनेछ।
तर,रातो कार्ड रेकर्ड
उनको लापरवाह व्यवहार को बारे मा उपरोक्त बिंदु जारी राखयो, जेडने को उनको नाम मा एक अन्य रेकर्ड छ - केहि छ कि उनको रुचि छैन।
उसले 1998 मा सऊदी अरब विरुद्ध आफ्नो दोस्रो विश्वकप खेल खेल्दै गर्दा, फ्रांसीसी-अल्जेरियनले उनको स्याहारलाई अर्को प्रदर्शनमा देखाउँदा उनी सउदी खेलाडी फुद अनवरमा झुन्ड्याइन्। जेफेनको अभिनय कार्यको लागि रेफरीले सीधा रातो कार्डको उत्पादन गरेन, किनभने विश्वकप विश्वकपमा रातो कार्ड प्राप्त गरेपछि फ्रान्स फर्केर फर्केर फर्केर फर्केर फर्के।
Zinedine Zidane तथ्य - रातो कार्ड इतिहास
अन्तमा, उनले उनको लागि बनाए भने टूर्नामेंटको फाइनलमा उनको दुई गोलले फ्रान्सलाई उनको पहिलो विश्व कप ट्रफी प्रदान गर्यो।
Zinedine Zidane कार वादा
Zinedine Zidane कान को लागि 16 को मात्र उमेर मा आफ्नो पहिलो बनाया। क्लबको अध्यक्ष उनको मुकुट गहनाको धेरै मनसाय थियो कि उनले उनीहरूलाई एक उपहारको रूपमा कारको प्रतिज्ञा गरे जब उनले क्लबमा पहिलो गोल गरे। र तिनको हात एक नयाँ नयाँ कारमा प्राप्त गर्न दुई वर्ष लाग्न थाल्दछ।
10th फेब्रुअरी 1991 को, उनले एक नाइटस को विरुद्ध उनको पहिलो प्रतिस्पर्धी लक्ष्य बनाए जसलाई2गोल द्वारा 1 सम्म क्यान्सर द्वारा संकुचित भएको थियो।
यो पहिलो लक्ष्य थियो जुन उनी आफ्नो व्यावसायिक क्यारियरमा स्कोर गर्न गए। उनीहरूले धेरै गोलहरू नहुन सक्छ जसलाई एक आक्रमण मिडफिल्डरबाट आशा गर्दछन्। तथापि, त्यहाँ एक दावी छ कि उनी प्रतिद्वंद्वीको बक्स भित्र घृणा गर्थे र सट्टा मात्र स्ट्राइकरहरू खाना खान मन पराउँथे।
हामी सबै आफ्नो लागि Zidane सम्झना 2006 विश्व कप अन्तिममा हेडबट। त्यसअघि, ब्राजिल विरुद्ध 1998 विश्व कपको फाइनलमा उनको अचम्मको प्रदर्शनका लागि सम्झना भएको थियो।
Zinedine Zidane तथ्य
त्यस खेलमा, लेस ब्लुजलाई ब्राजिलको विरुद्धमा एकदम धेरै एक्सएनएक्सएक्स-एक्सएनएमक्सले जित्न दुई गोल गर्यो। धेरैले यो थाहा छ। तथापि, कुन कुरा थाहा छैन कि दुई गोल उहाँले जित्नुभयो - र अझै पनि बनी - एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रहरू विरुद्ध मात्र उनले मात्र दुई गोल गरे।
यो एक अजीब तथ्य हो कि उनको क्यारियर एक दशक देखि अधिक को लागि प्रायोजित छ र लैटिन टीमहरु को बिरुद्ध एकदम केहि मुठभेड थियो। यद्यपि, ती दुई लक्ष्यहरू शायद सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण थिए जो उनले कहिल्यै रन बनाए।
तर,धेरैलाई फुटबलमा प्रेरित गरियो
तिनी धेरै व्यावहारिक सबै मुस्लिम फुटबलरहरूको लागि आइडल हुन् जसले युरोपमा गरिब बाहिर निस्क्यो।
फीफा 1998 विश्व कपमा उनको टोलीको प्रदर्शनले मनपर्छ करीम बेंजमा, एन'कोलो कान्टा, Tiemoue Bakayoko, थॉमस लेमर, एंथोनी मार्शल, एन्टोन ग्रिजमन, Ousmane Dembele र अलेक्जेन्डर लेकाजेट आफ्नो युवाहरूको समयमा फुटबललाई अझ गम्भीर रूपमा लिने।
तल यो चित्र बाहेक केहि पनि भन्छन् कि त्यो भक्त मुस्लिम हो।
अझ धेरै, उनको सबै बच्चाहरु को नाम क्रिश्चियन नामहरू फेरि "भक्ति मुस्लिम" को रूपमा वर्णन गर्न विरोधाभासमा छ। तथापि, उहाँ सामान्यतया यसो भन्नु भएको थियो कि अल-कुर्सी हरेक खेलको अघि जब उनी फुटबलर थिए।
फ्रेन्च फुटबल डायरी
Matteo Guendouzi बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
25 सक्छ, 2018